Nanorina ny orinasa
Niorina tamin'ny 2006 ny orinasa SINO-COOL, mino foana isika fa ny hanome ny vokatra kalitao sy ny vidiny mirary ihany no handehanana lavitra! Misaotra an'ireo mpiasa aminay koa izahay noho ny asa mafy nataon'izy ireo mba hahatrarana ny valiny androany.
Isan-taona dia mandray ny fampirantiana vata fampangatsiahana mihoatra ny 10 isika. Ity no asehontsika amin'ireo mpanjifa rehetra ao amin'ny lanjan'ny fangatsiahana any Chine. Nasehontsika amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao miaraka amina ekipa toetra sy tanora tompon'andraikitra. Ny faritra fampirantiana fampirantiana dia manana mirefy 80 metatra, ny asantsika rehetra dia voatsindrona avokoa ...
Natsangana izahay Sinocool tamin'ny 2007, ary tamin'ny taona 2017 dia nifindra tao amin'ny tranobe birao lankmark izahay izay manana 1200 metatra toradroa, fananan'ny SINOCOOL, dia manome ny tontolo fiasana milamina indrindra izahay, ary manana mpiasa miisa 26, izay ao anatin'ny 35 taona, afaka hiatrehana ireo asa matotra ary manome servi tsara indrindra ...